Efa vaovao ny taona any Nouvelle-Zélande. Izy no firenena voalohany nisantatra ny taona 2020. Efa taom-baovao ihany koa any Aostralia sy Korea Atsimo amin'izao. (Jereo Sary Tohiny)
Sary: Randrianiaina Luciano
lundi, 30 décembre 2019 09:33
Maroantsetra: Miverina tsikelikely amin’ny laoniny ny fiainan’ny mponina
Nidina tao Maroantsetra ny delegasionan’ny governemanta notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben'ny governemanta Ntsay Christian, omaly alahady 29 desambra 2019. Nambarany fa harenina ao anatin’ny fotoana fohy ny lalana tapaka amin'ny RN5, izay mampitohy an'i Soanierana Ivongo – Mananara Avaratra – Maroantsetra, tapaka noho rano be nentin’ny andro ratsy nanodidina ny krismasy lasa teo. Novatsiana fanafody ireo tobim-pahasalamana any an-toerana hifehezana ny mety fihanaky ny valanaretina. Manomboka miverina ny famatsiana herinaratra izay tapaka nandritra ny herinandro.
lundi, 30 décembre 2019 09:24
Jirama Ambositra: Sivy lahy tratra nangalatra solika, nidoboka am-ponja avokoa
Nitrangana halatra solika tao amin'ny tobim-pamokarana herinaratry ny Jirama Ambositra, ny Zoma teo tokony ho tamin'ny sivy ora sy sasany alina. Olona miisa sivy no tra-tehaka tamin'izany ka mpiasa ny roa, ary mpiambina ny fito. Tratra niaraka tamin'izy ireo ny gazoala 170 litatra efa natao anaty daba miaty 20 litatra miisa sivy, ary nisy daba 12 hafa tsy mbola nisy solika. Nampidirina am-ponja vonjimaika avy hatrany izy sivy lahy, raha toa ka efa mandeha ny famotorana amin'izao.
Tovovavy iray, 16 taona, mpianatra taona faha-11 amin’ny sekoly tsy miankina iray eto Mandritsara no natelin'ny rano, raha nitsaka ny reniranon'i Mangarahara, androany maraina. Efa tamin’ny fiandohan’ny tolakandro, nanodidina ny tamin’ny 1ora vao hita, saingy efa vatana mangatsiaka natsingevan’ny rano. Efa eo anivon’ny fianakaviana eny Ambalabe ny razana. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 26 décembre 2019 21:24
Farihin’i Tritriva: Vehivavy niara-maty tamin’ny zanany teo am-babeny
Nibolisatra ka latsaka ary dobo an-drano sa namono tena ? Samy mametra-panontaniana izay nahita ny sarin’ireto mpianaka, ramatoa iray miaraka amin’ny zaza eo am-babeny niara-maty, ary natsingevan’ny rano tao amin’ny farihin’i Tritriva ao Antsirabe androany. Mbola nahitana entan-kely amin’ny gony jiafotsy niaraka tamin’izy mianaka. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 26 décembre 2019 20:52
Lalam-pirenena faha-13: Andiana fiara notafihin’ny dahalo
Fiara efatra nitanjozotra mianatsimo manaraka ny lalam-pirenena faha-13 no notafihin’ny andian-dahalo teo Manangovy, tanàna anelanelan’i Betroka sy Soanala ny alin’ny krismasy 25 desambra 2019. Vatan-kazo no nataon’ireo dahalo sakana teo amin’ny arabe nampijanonana ny fiara. Vantany vao nijanona ireo fiara dia nanao tifitra variraraka ireo dahalo. Vaky ny fitaratry ny fiara sasany, ny hafa teny amin’ny vatan’ny fiara no nisy diam-bala. Nanezaka nandeha mafy ny fiara, ka voadingana ny sakana nahafahan’izy ireo nanavotr’aina niala ny fandrobana. Ny alin'ny zoma lasa teo dia nisy fiara taksiborosy TATA iray ihany koa nosakanan'ny dahalo teo amin'io toerana io, fa voadingany ireo vato nataon'ny dahalo sakan-dalana ka tafatsoaka na teo aza ny tifitra nataon'ny dahalo.
jeudi, 26 décembre 2019 10:29
Ambatomanoina: Zandary iray lavo amperin’asa, roa hafa naratra
Tany ampamitana iraka, nanao fisafoana ireto Zandary telolahy no notafihin’ny jiolahy mitam-basy tao Ambohimiandry Fokontany Miarikofeno, Kaominina Ambatomanoina, Distrika Anjozorobe ny marainan’ny 24 desambra 2019. Vokany, lavo ny Zandary iray, ny roa naratra ka ny iray voatery nalaina tamin'ny angidim-bý nakarina eto an-drenivohitra ary tsaboina ao amin’ny Hopitaly miaramila Soavinandriana noho ny ratra mafy nanjo azy. Voatifitra tao an-damosiny no nahalavo ilay Zandary iray ; voatifitra teo amin'ny kibony sy fe ilay iray tsaboina ao amin’ny CENHOSOA. Atao hazalambo ireo nahavanon-doza. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 26 décembre 2019 08:37
Toamasina: Mpivarotra hamonjy fodiana sady voatifitra no voaroba 3 000 000 Ariary
Mpivarotra iray, 44 taona, no notifirin’ny jiolahy ny talata 24 desambra tokony tamin'ny 07ora hariva raha hamonjy fodiana avy nivarotra. Voa teo amin'ny tratrany sy ny sandriny ilay mpivarotra, ary mbola voaroba ny vola maty ny tontolo andro tany aminy, manodidina ny 3 000 000 Ariary. Nodidiana ny talata alina ilay mpivarotra ary avotra ny ainy. Tsy lavitra ny Commissariat Bazary Kely no nitrangan'ny tifitra saingy tsy naheno ireo Polisy tao raha tsy ny tany amin'ny Hopitaly Be no niantso fa naharay olona voatifitry ny jiolahy izy ireo tokony tamin'ny 07ora sy 25min hariva.